Saudi Arabia ट्रेण्डिङ्ग
विश्वकपको अन्तिम १६ मा कुन–कुन टिमले स्थान पक्का गरे ? बाहिरिनेमा को ?
काठमाडौं । मंगलबार राति सम्पन्न नाइजेरिया र अर्जेन्टिनाको खेलसँगै फिफा विश्वकपमा अब मात्र ४ समूहको ८ वटा खेल बाँकी रहेको छ । विश्वकपमा हालसम्म समूह ‘ए’ बाट उरुग्वे र रसिया, समूह ‘बी’बाट स्पेन र पोर्चुगल, समूह ‘सी’ बाट फ्रान्स र डेनमार्क तथा समूह ‘डी’ बाट क्रोएशिया र अर्जेन्टिनाले अन्तिम १६ मा स्थान बनाइसकेका छन् ।
२४ वर्ष पछि साउदी अरबले विश्वकपमा रचेको इतिहास
काठमाडौँ । इन्जुरी समयमा गरेको गोलको मदतमा साउदी अरेबियाले विश्वकपमा इजिप्टलाई २–१ गोलले हराउन सफल भयो।
आजबाट विश्वकप रोमाञ्चक मोडमा, को अन्तिम १६ मा पुग्ने को घर जाने टुंगो लाग्ने
काठमाडौं । आजबाट विश्वकपको समूह चरणको तेस्रो खेल सुरु हुँदैछ । आजबाट सुरु हुने खेलले विश्वकपमा आगामी यात्राको बारेमा टुंगो नलागेका राष्ट्रहरुको बारेमा निर्णय हुनेछ ।
विश्वकपअन्तर्गतका आजका तीन वटै खेल महत्वपूर्ण (कुन खेल कति बजे ?)
काठमाडौं । विश्वकप सुरु भएको छैठौं दिन आज ३ महत्वपूर्ण खेलहरु हुँदैछन् । आज समूूह ‘ए’ को एक खेल तथा समूह ‘बी’ का दुई खेलहरु हुन लागेका हुन् ।
विश्वकप समूह एबाट रसिया रसिया अन्तिम १६ मा पुग्ने इजिप्ट बाहिरिने सम्भावना
काठमाडौं । विश्वकपको समूह ‘ए’ मा रहेको अफ्रिकी राष्ट्र इजिप्ट समूह चरणबाटै बाहिरने सम्भावना प्रवल भएको छ । दोस्रो खेलमा पनि पराजय ब्यहोरेपछि इजिष्ट बाहिरिने खतरा बढेको हो ।
विश्वकपः साउदी अरेवियाका खेलाडीहरु बोेकेको विमानको एउटा इन्जिनमा आगोलागेपछि
काठमाडौँ । साउदी अरेबियाको टोली दोस्रो विश्वकप खेलका लागि रोस्टोभ–अन–डन मा सुरक्षित अवतरण भएका छन् । साउदी अरेबियन फुटबल
मस्को । बिहीबार एक भव्य समारोहबीच विश्वकप फुटबल २०१८ सुरु भएको छ । विश्वकप फुटबलको पहिलो खेलमा नै आयोजक राष्ट्र रुस र साउदी अरेबियाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।